10 Meelo Saaxiibtinimo LGBT oo Cajiiba | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Meelo Saaxiibtinimo LGBT oo Cajiiba
Haddii aad tahay diva, fashionista, queer, qaniis, lesbian, ama aan diyaar u ahayn is-qeexitaan, kuwan 10 meelaha laga argagaxo ee LGBT ayaa kugu soo biiri doona oo kuu dabaaldegi doona. Laga soo bilaabo dhunkashada Paris illaa xaflad sida xiddig dhagax ah oo ku taal Berlin, magaalooyinkan cajiibka ah ee yurub waxay ku saabsan yihiin xuquuq siman, faan, iyo jacayl ku jira dhammaan midabada qaanso roobaadka.
1. Meelo Cajiib ah oo LGBT-saaxiibtinimo ku socda Dunida: Berlin
Dhammaantood waxay ku bilaabmeen aasaaska ururkii ugu horreeyay ee khaniisiinta iyo adduunka. 1897 waa sanadkii lagu calaamadeeyay talaabada ugu horeysa ee Isbadalkii Berlin ee caasimada gay iyo lesbian-ka aduunka.
Quruxda iyo jacaylku waxay ku yimaadaan nooc kasta, midabada, iyo galmada. Berlin waa mid ka mid ah kuwa ugu dulqaadka badan, furid, iyo soo dhaweynta magaalooyinka dunida. Berlin waa meel laga cabsado LGBT-ga Yurub waana la soo dhaweynayaa nooc kasta oo jacayl ah. maanta, berlin waa meesha ugu dambeysa ee LGBT loo socdo, laakiin waxay kasbatay caannimadeeda kaliya inta lagu gudajiray qarnigii 20aad, si aad u qurux badan wadada dheer ee magaalada ay sameysay.
Nollendorfplatz oo ku yaal Schoneberg waa qalbiga iyo nafta duurjoogta ah ee caan ka noqoshada khaniisiinta ee Berlin. halkan, waad xafladeyn kartaa, taada, cabniinka, oo ku raaxee nolosha LGBT iyo dhaqanka.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagula kulmo LGBT extravaganza waa xilliga xagaaga, gudaha CSD Berlin. Ku dhowaad 1 milyan qof iyo boqolaal ka mid ah sabeynta la sharraxay ayaa abuuraya mid ka mid ah bandhigyada ugu waa weyn adduunka, xuquuq siman iyo xorriyad jacayl dhammaan midabbada qaanso roobaadka.
Waxyaabaha Ugu Wanaagsan Ee La Sameeyo
Booqo madxafka gay Schwules, taajkii ugu horreeyay ee dhaqdhaqaaqa khaniisiinta, baarka caanka ah ee Marietta, Cafe Berio, naadiga ugu da'da weyn Heile Welt gay, ama xafladaha ugu fiican ee KitKat-Klub.
2. Meel Xun LGBT Loogu Talo Galay Nederland: Amsterdam
Markaad tahay wadanka ugu horeeya aduunka ee sharciyeeya guurka dadka isku jinsiga ah, sidoo kale waxaad tahay mid ka mid ah meelaha laga cabsado uguna wanaagsan ee LGBT adduunka. Sidaas, madadaalo iyo cajaa'ib leh Amsterdam waxay ahayd magaaladii ugu horreysay Yurub ee martigelisa Ciyaaraha Gay 1998 iyo Amsterdam sharaf sharaf ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka.
Haddii aadan ogeyn meelaha lagu garaaco magaalada, ka dib ku istaag dhanka Bar casaan ah, meesha loogu talagalay macluumaad ku saabsan LGBT- dhibco saaxiibtinimo ee Amsterdam. Amsterdam waxay leedahay wax laga naxo muuqaal nololeed habeenkii, laakiin intaan qorraxdu dhicin, waa inaad ku dhex lugeeysaa jidadka soo socda iyo aagagga, halkaas oo muuqaalka LGBT uu ku neefsado oo uu laado: Reguliersdwarsstraat, taariikhi ah Kerkstraat, Amstel, ka dibna Zeedijk iyo Warmoesstraat oo loogu talagalay goobta nolosha cawayska ee LGBT ee Amsterdam.
Baro muuqaalka jiidista sumcad xumada leh ee Boqoradda Madaxa, ku dhex nuugo is biirsaday 'Getto', ku dhiirrigeliso dukaanka buugaagta ee LGTB ee Amsterdam, Farxada, iyo xaflad ka dhaceysa naadiyada Tabuu ama Exit ee wadada Reguliersdwarsstraat. Intaa waxaa dheer, Ku faanida kanaalka Amsterdam waa mid ka mid ah meelaha lagu faani karo ee ugu caansan adduunka.
3. Meesha ugu Wanaagsan ee LGBT ee UK: Brighton
Tan iyo sanadkii 1930-kii ee Brighton waxay hoy u noqotay qof walba oo u baahnaa inuu sahamiyo galmada. Magaaladii xeebta ku tiirsaneyd waxay noqotay meel saaxiibtinimo LGBT ah oo ku taal Boqortooyada Midowday, dhow laakiin ka fog caasimada.
Xaafadda Kemp Town waa aagga LGBT ee Brighton, mahadsanid hudheelladooda qurxinta, pubs, iyo maqaayado. halkan, waxaad ka heli doontaa vibes la yaab leh, jawi qabow oo aad ugu dabbaaldegi karto jacaylka nooc kasta oo uu yahay. Waxaa intaa dheer, haddii aad qorsheyneyso inaad jidkaaga oo dhan u raacdo gacaliyahaaga, markaa Brighton waxay leedahay in kabadan dhowr goobood oo aroos ah sida Royal Pavilion, oo si toos ah halkaas ayaa looga bilaabaa xafladaha Charles Street ama Brighton beach.
Ku raaxayso pint a gay khamriga Bulldog, laakiin marka hore ku raaxeyso Sauna Brighton, habeenkiina aarso, naadiga habeenkii ee LGBT.
4. Magac Cajiib ah LGBT Magaalada Jarmalka: Cologne
Magaalada leh maqaaxiyo ka dad badan, iyo dhacdooyin sharaf badan oo ka badan meel kasta oo kale, Cologne waa mid ka mid ah meelaha laga cabsado uguna wanaagsan LGBTQ ee Yurub. Cologne waa mid LGBTQ-saaxiibtinimo leh oo leh safar Gaily oo u gaar ah, si aad u ogaan karto sirta ugufiican magaalada ee dhadhan kasta iyo midabka qaansoroobaad.
Intaa waxaa dheer, Cologne waa meesha ugu dambeysa ee LGBT loo socdo, maxaa yeelay waxay leedahay 2 muuqaalada gay, haa taasi waa sax. The jir Heumarkt-Mathiasstrasse iyo magaalada saddexagalka Bermuda ee dadka yar yar. Galbeedku waxay leedahay xaflado ugu fiican iyo naadiyada qoob-ka-ciyaarka si ay u ruxaan jirkaaga iyo bariga meelaha dabaqadda leh iyo meelaha nasashada ee dhaqanka.
Ha haysan waqti aad ku booqato labadaba? No walwal! Sababtoo ah tareenka dhulka hoostiisa mara ee S-Bahn, waad safri kartaa horey iyo gadaalba inta jeer ee aad rabto iyo super-soon.
Ha moogaan maalinta Cologne ee Christopher Street, dabcan dunida-caan ka ah Cologne Pride. Intaa waxaa dheer, Suuqa Cologne’s Gay Christmas, iyo Carnival bishii Febraayo. Wixii xafladda ka dib fiiri dekedda 5 ama Amadeus.
5. Meel Caan Ah LGBT Loogu Talo Galay Faransiiska: Paris
Magaalada ugu jacaylka badan adduunka ayaa u dabaal degta jacaylka daqiiqad kasta oo maalin kasta ah, waana lagugu soo dhaweynayaa si aad ugu dabaaldegto jacaylkaaga midabbada midabada qaansoroobaad. Buuxi glam, qaab, fasalka, iyo baashaal, Paris waa mid ka mid ah LGBT-ka ugu cabsida badan- meelaha saaxiibtinimada leh ee adduunka.
Marais qurux badan ayaa ah xarunta goobta qaniisiinta ee Paris, oo leh dhammaan goobaha caanka ah ee LGBT ee ku yaal meesha caanka ah ee de de Bastille, Fagaaraha Jamhuuriyadda, iyo Hotel de Ville. Sanadka oo dhan, laga bilaabo Jannaayo illaa Luulyo, waxaa jira dhacdooyin la yaab leh oo loogu talagalay bulshada LGBT: ciidaha, farshaxanka, film, dabcanna faan-faan. halkan, waxaad dareemi doontaa gurigaaga, oo waxay leeyihiin siyaabo badan oo lagu sahamin karo bulshada LGBT ee Faransiiska laguna ogaan karo Paris.
Raidd Barn oo loogu talagalay qoob-ka-ciyaarka qoob-ka-ciyaarka iyo qoob-ka-ciyaarka galmada, Makhaayada Debonair ee saqafka sare ee Cite de la Mode et du Naqshadeynta makaroon iyo aragtiyaha cajiibka ah ee Seine, iyo Badaboum bistro ee degmada Bastille oo loogu talagalay dhammaan fanaaniinta Faransiiska cusub iyo kuwa casriga ah, oo ku dhunko dusha Eiffel Tower xagga dambe.
6. Magaalada Cajiibka Ah ee LGBT ee Awriya: Vienna
Taariikhda iyo dhaqanka hodanka ah ee Austria waxaa ka buuxa sheekooyin ku saabsan boqorada khaniisiinta, sidaas ahaanshaha LGBT- saaxiibtinimo waa qayb ka mid ah magaaladan quruxda badan ee DNA. Sidaa darteed, la yaab maleh inaad Vienna ku sii socon karto 2 Safarada magaalada khaniisiinta si loo ogaado taariikhda bulshada LGBT iyo nolosha. Intaa waxaa dheer, si la mid ah meelaha kale ee saaxiibtinimo ee LGTB ee ku yaal liistadayada, waxaa jira dhacdooyin badan oo LGTB ah intaad tirinkartid sanadka oo dhan.
Mid ka mid ah dhacdooyinka gaarka ah ee LGBT ee sanadka waa Ballbow Rainbow. Hoteelka Schonbrunn ayaa martigelinaya kubbaddan weyn, halkaas oo aad ku dheeli karto Waltz oo aad ku muujin karto dareenkaaga moodada ah ee moodada dharka kubbadaha cajiibka ah iyo tuxedos.
Dhadhamiya kafeega Viennese ee Cafe Savoy, xafladda Miss Candy ee naadiga Jannada Vienna, dheh I Dos oo ku yaal goob Alpine ah oo la yaab leh, oo sawirradaada arooska ka qaad markii naqshadaha quruxda badan ee magaaladu ay kugu xeeran yihiin.
7. Magac Cajiib ah LGBT City In Ireland: Dublin
Waxaa laga yaabaa in Ireland dad badani u yaqaanaan inay aad u adag yihiin, diinta, oo barafoobay waqtiga. Si kastaba ha ahaatee, taasi maaha kiiska Dublin ee firfircoon, madadaalo, iyo aad u LGBT- friendly. In 2015, guurka khaniisiinta ayaa sharci noqday, guul la yaab leh oo ku saabsan isbeddelkii Ireland ee xorriyadda, iyo qaran furan.
Sayidka, waxaad ka heli doontaa Dublin beddelaad la yaab leh LGBT- saaxiibtinimo caga Amsterdam iyo berlin. Juun waa bisha Kibirka ee Dublin, laakiin sidoo kale waa inaad fiirisaa Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Dublin Gay, adduunka ugu weyn.
Is biirsaday ama xaflado George Bar, machadka khaniisiinta ee Dublin, PantiBar, Makhaayada Oscars, dalxiis, ama sauna qaniis ah oo lagu nasto waa waxyaabaha ugu dambeeya ee la sameeyo si runtii loogu raaxeysto bulshada cajiibka ah ee LGTBQ ee Dublin.
8. Ujeedo LGBT Ujeedo Saaxiibtinimo: Belgium
Ghent iyo Brussels waxaa loo yaqaanaa 2 Meelaha ugu xiisaha badan LGBT-saaxiibtinimo ee Belgium. Dalkani wuxuu ahaa kii labaad ee sharciyeeya guurka dadka isku jinsiga ah. Magaalada Brussels, Rue du Marche au Charbon waa xarunta muuqaalka LGBT.
Tusaale ahaan, guriga Rainbow, waad ku raaxeysan kartaa xafladda filimka Lesborama, bandhigyo farshaxan, iyo hawlo kale oo badan oo dhaqameed ah. Si kastaba ha ahaatee, hadaad rabto inaad carrabka ku dhufato waxa ay hooyo ku siisay, ka dibna Chez Maman wuxuu soo dhaweynayaa divas midabbo iyo dhaldhalaalka qaanso roobaadka.
9. Ujeedo LGBTQ Saaxiibtinimo: London
West End, pubs, naqshadaha, Boqorada. London waa astaan ​​ma aha oo kaliya sababtoo ah boqortooyada, laakiin maxaa yeelay waa meel laga cabsado LGBT Yurub. Magaalada waa microcosmos-ka adduunka, oo macnaheedu yahay magaalada soo dhaweyneysa dadka ka kala yimaada daafaha dunida, sidoo kale waa mid diiran oo saaxiibtinimo u leh khaniisnimada, lesbian, queer, ama jinsi beddelid.
Dukaan iibsi gaar ah, yaab leh baararka dusha sare, tiyaatarka, iyo muusig, London’s waxay heshay dhibco fara badan oo xiiso leh si ay ugu raaxaystaan ​​waxa ugu fiican nolosha LGBT iyo dhaqanka.
Sidaas, haddii aad rabto inaad ku raaxaysato waxa ugu fiican LGTB ee London, madax u noqo Dlastone Superstore oo loogu talagalay cabaret-ka ugu fiican. Muuqaalka ugu fiican, Buugga 'Glory pub' waa mid heer sare ah, oo hubi inaad joojiso dukaanka buugaagta buugaagta LGBT ee ugu da'da weyn England, Erayga Gay.
10. Meelo Saaxiibtinimo LGBT oo Weyn: Milan
Si ka duwan magaalooyinka kale ee LGBT-saaxiibtinimo liistadayada, Xuquuqda LGBT laguma sharciyeeyo Milano. Si kastaba ha ahaatee, caasimada moodada iyo quruxda badan ee adduunka ayaa ku faaneysa jawi firfircoon oo jinsi ah xitaa waxay martigelisaa sannadle filim LGTBQ ah.
Marka Milano, xaafadda Porta Venezia waa halbowlaha nolosha iyo dhaqanka LGBT. On jidadka Lecco iyo San Martini, waxaad ka heli doontaa baararka iyo naadiyada ugu quruxda badan.
Aad bay u fududahay in la tababaro safarka Yurub oo lagu safro Save A tareenka laakiin had iyo jeer ma sahlana in la helo meelo cabsi leh oo LGBT-saaxiibtinimo leh, marka tani waa sababta aan kuugu qornay qoraalkan blog-ka ah.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada barta "10 Awesome LGBT Friendly Destinations" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fawesome-lgbt-friendly-destinations%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
qaniis lesbian LGBT LGBTdestinationsineurope LGBT saaxiibtinimo LGBTF FriendlyDestinations LGBTQ KibirkaParadeEurope